Backgammon🥇 Tinye ma nwee obi ụtọ site na Emulator.online
Backgammon: otu esi egwu egwu site na nzọụkwụ? 💡
Iji kpọọ backgammon online n'efu, naanị soro usoro a site na ntuziaka:
Nzọụkwụ 1 . Mepee ihe nchọgharị ị họọrọ ma gaa na ebe nrụọrụ weebụ egwuregwu Emulator.online.
Nzọụkwụ 2 . Ozugbo ị banyere websaịtị, a ga-egosipụta egwuregwu ahụ na ihuenyo ahụ. Naanị pịa na "Iji kpọọ " ma ị nwere ike ịmalite igwu egwu, họrọ igwu egwu megide igwe ma ọ bụ soro enyi gi gwurie egwu.
Nzọụkwụ 3. Ndị a bụ ụfọdụ bọtịnụ bara uru. Nwere ike "Tinye ma ọ bụ wepu ụda", Pịa bọtịnụ"kpọọ"ma malite igwu egwu, ị nwere ike"Kwụsịtụ"y"Malitegharịa ekwentị"oge obula.
Nzọụkwụ 4. Wepụ iberibe niile ahụ n'ihu onye iro gị.
Backgammon pụtara 🙂
Okwu Backgammon bụ aha enyere egwuregwu nke mejupụtara a mbadamba taịlị dị iche iche na agba, nke choro ibu haziri na elu ewepụghị, na-emekarị mbadamba, n'ihi ya aha ya.
Dabere na iwu, nke dị iche maka egwuregwu ọ bụla, otu ma ọ bụ karịa mmadụ nwere ike isonye. Ọ bụ ezie na egwuregwu ụfọdụ chọrọ ka ndị sonyere na-eji usoro aghụghọ ma ọ bụ usoro ọgụgụ isi, ịhazi ihe, enweghị ntuziaka, ncheta, ikike iwepụ, ma ọ bụ nka ndị ọzọ, egwuregwu ndị ọzọ bụ naanị ohere dị ọcha, mmeri ma ọ bụ ịla n'iyi.
Site na ọdịdị ya, egwuregwu n'ozuzu anaghị agụnye mmega ahụ, ọ bụ ezie na ụfọdụ gụnyere okpokoro ahụ ma rụọ ọrụ na mpụga ya. Egwuregwu bọọdụ na-ejikọkarị ya n'ụdị dị iche iche dika njirimara ya puru iche.
Ndị a bụ ụfọdụ ihe atụ nke ha.
Ndị jiri dais: Ha bụ egwuregwu ha na-eji dais ma ọ bụ iberibe ha na ha, dị ka Tauli, Ludo, Parks, Backgammon, Agwọ na dersrị larịị n'etiti ndị ọzọ.
Ndị ha na-eji akara ngosi: Ejikwa ha egwuregwu na-eji tokens dị ka isi mmewere. Ihe atụ nke ụdị egwuregwu a bụ dị ka domino ma ọ bụ mahjong.
Egwuregwu ọdịnala ọdịnala: Ndị a bụ egwuregwu a na-egwuri na bọọdụ, dị ka egwuregwu ezinụlọ nke chess (Western chess, Xiangqi ma ọ bụ Shogi "cheesi China" ma ọ bụ "Japanese chess", the Janggi or "Korean chess" or Makruk, akpọkwara "Thai chess"), ụmụ nwanyị, Chinese chess, Hnefatafl (egwuregwu ezinụlọ German), Mancala (egwuregwu ezinụlọ na Surrta).
Egwuregwu oge a: Ọ bụ ezie na ọdịicheghị nke ọma n'etiti ihe a na-akpọ "bọl egwuregwu," a na-akpọkwa egwuregwu ndị a n'ihi na n'ọtụtụ imirikiti ọ na-eji atụmatụ maka mmepe nke egwuregwu ya. N'ezie, ụwa Brazil na-akpọ egwuregwu agha ọtụtụ ndị na-akpọkarị "egwuregwu agha" bụ ntụgharị asụsụ nkịtị.
Egwuregwu ọtụtụ: Enwere ike itinye ha n'ọnọdụ ụfọdụ ihe karịrị ndị egwuregwu atọ, ma ha na-egwu egwu mgbe niile. N'ime ha bụ jEgwuregwu kaadị ọdịnala, ma obu nke nwere oche French ma obu nke Spanish; ma ọ bụ egwuregwu kaadị dị ka Hanafuda, nke bụ ọdịnala na Japan.
A oge a na azụmahịa variant nke kaadị egwuregwu, ha bụ egwuregwu anakọta kaadi dị ka Ime Anwansi: Nchịkọta ma ọ bụ Yu-Gi-Oh!.
Emepụtara ha n'etiti 1970. Ha bụ egwuregwu nke ọrụ nke onye ọzọ na-etinyekarị ndị egwuregwu n'ọnọdụ ụfọdụ nke ga - enyere ha aka ịgafe ule iji nweta otu ebumnuche na a tụgharịrị ha.
N'eziokwu, Njirimara nke Backgammon bụ ọrụ ọ bụghị iji tebụl. Dungeons & Dragons bụ ụdị a na-akpọ backgammon nke a na-akpọ fantasy fantasy, mana n'oge na-adịghị anya ọ na-akụ ahịa ahụ, nke sitere na ọdịdị nke backgammons ndị ọzọ nke ọtụtụ ụdị ndị ọzọ dị ka ọdịda anyanwụ, ịkwa iko, akụkọ sayensị, opera oghere, egwu gothic, ọchị, izu nzuzo, pirapu, wdg.
Akụkọ Backgammon 🤓
Aha Backgammon na-erite site n'okwu gamen (site na Bekee ochie), nke pụtara egwuregwu.
Egwuregwu nke ezinụlọ Backgammon bụ otu n'ime egwuregwu mbụ ịpụta. Imirikiti n'ime ha gụnyere ịkpụgharị dice ma ọ bụ ihe ha nhata dịka shells, mkpụrụ ma ọ bụ ezé ezé.
Ezinụlọ a gụnyere ọtụtụ egwuregwu a ma ama, gụnyere Senet (a hụrụ otu egwuregwu ahụ n'ili Tutancamon), Nyout (egwuregwu Korea), Patolli (ikekwe egwuregwu kachasị amasị ndị Aztec), Pachisi (egwuregwu mba India, yana ndị ọzọ variants) na Ludo na Chispa) na egwuregwu nke ọgazị (egwuregwu Europe nke ghọrọ ewu ewu na narị afọ nke XNUMX).
Enwere ike ịsị na Backgammon bụ nsonaazụ nke ọtụtụ mgbanwe na mgbanwe, yana ọtụtụ egwuregwu ndị ọzọ oge ochie ka dị ruo taa. O nwere ike ịbụ na o metụtara ndị Sumer na Ijipt mepere anya oge ochie. Obe ndị ahụ adịghị ka nke ndị nke oge a n’ili ndị dị na Ndagwurugwu Naịl dị n’Ijipt, yanakwa n’ebe ndị a na-eli ozu n’obodo Ọọ na Mesopotemia.
Tupu 800, egwuregwu a na-akpọ Nard pụtara na Persia. O yikarịrị ka ndị Arab maraworị egwuregwu ahụ, yana egwuregwu ndị ọzọ, mgbe ha meriri Persia na narị afọ nke asaa. Ndị Peasia, n'aka nke ha, mụtara egwuregwu ndị a n'aka ndị Hindu, onye nwere ike ịmara ha site na ndị China. Mana ọ bụ ndị Arab welitere egwuregwu ndị a ruo ogo dị mkpa nke na ha dere akwụkwọ mbụ gbasara ha. Nard na ụdị dị iche iche dị n'ọtụtụ ebe na Asia.
O yiri ka ọ bụ egwuregwu Arab ka ndị Arab wepụtara egwuregwu Nard na Europe, na ngwakọta ya na egwuregwu Tabula ọ rụpụtara ụdị ọhụrụ. Ejiri 30 mee ihe na mbadamba 24, nke a na-akọwa ngagharị ahụ site na 2 dice.
N'oge na-adịghị anya egwuregwu ọhụrụ ahụ ghọrọ ewu ewu, na-eji asọmpi chess maka ọnọdụ mbụ n'etiti ndị a ma ama, ebe emesịrị iji egwuregwu kaadị.
Na narị afọ nke iri na asaa pụtara a ọhụrụ variant na, yana ndozi ndozi, dugara na revitalization nke egwuregwu na-agbasa ofụri Europe. Ọ bịara mara ya na England dị ka Ndabere, na Scotland dị ka Gammon, na France dị ka Trictrac, na Germany dị ka Puff, na Spain dị ka Tablas Reales na astali dị ka Tavole Reale.
N'oge tupu Agha Worldwa nke Abụọ, ịgba chaa chaa na-agba ọkụ. Otu n'ime ihe kpatara ya bụ ihe ọhụụ nke onye America mere na 1925, enwere ike ịba uru nke isi ihe a na-egwu. Ma ọzọ, egwuregwu ahụ dabara.
N’afọ ndị 1970, na-atụghị anya, ghọrọ onye ama ama ọzọ, ruo na taa ọ dị mfe ịchọta ịzụta ma akụrụngwa na akwụkwọ ntuziaka. Na Middle East, Trictrac nọgidere na-ewu ewu ma na-egwuri egwu na Lebanọn na mba ndị agbata obi ya.
Ihe igwu egwu Backgammon💡
Iji kpọọ Backgammon, ị ga-achọ ndị sonyere 2, bọọdụ backgammon, taịl ojii iri na ise, taịlị iri na ise na ụzọ abụọ mara mma 15, jiri ụlọ nwere akụkụ 15 gbakọọ site na 6 ruo 24 ma kee ya ụzọ anọ.
Ndị na-egwu egwuregwu - 2
Mkpa ma ọ bụ nkume - 15 ojii, 15 ọcha
Ọdụ - 24lọ nwere agba 6 jikọtara ọnụ site na 6 ruo 4 ma kee ya ụzọ anọ
Ebumnuche: Kpochapụ taịl nile site na mbadamba ahụ tupu onye mmegide.
Iwu Backgammon egwuregwu📏
Nke a bụ a nchịkọta ngwa ngwa nke Iwu Backgammon:
Tọọ onye ọkpụkpọ mbụ site na ịpị lị
Bugharịa akụkụ dabere na ụkpụrụ ndị e si na data ahụ
Nchịkọta data na-enye ohere ịmegharị abụọ
Anabataghị gị iberibe iberibe ihe karịrị abụọ
Ọ bụrụ na ụlọ a lekwasịrị anya nwere naanị otu ibe, enwere ike ijide ya
Malite na wepụ iberibe gị n’elu bọọdụ mgbe ha niile nọ na njedebe ikpeazụ
Egwuregwu nke backgammon bụ egwuregwu bọọdụ ọdịnala, ebee onye mmeri bụ onye jisiri ike wepu iberibe ya niile na bọọdụ ahụ.
Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgụ Iwu zuru oke, Anyị na-ahapụ ha n'okpuru.
Nkọwa nke ihe ọkpụkpọ izizi
Tupu ịmalite ije nke iberibe ọ dị mkpa kọwaa onye ga-abụ onye ọkpụkpọ egwu.
Iji kọwaa onye malitere egwuregwu nke backgammon, ọ bụla ọkpụkpọ ga tụgharịa 1 anwụ. Onye ọ bụla nwetara uru kachasị elu ga-abụ onye mbụ na-egwu egwu. N'ihe banyere nke eriri, a na-ahapụ dice ahụ ọzọ ruo mgbe akọwapụtara onye ọkpụkpọ mbụ. Nke ikpeazụ ga-ewere nzọụkwụ mbụ, na-eji uru nke ọpụpụ ọ ga-ebu ụzọ egwu.
Ihe nlele: Player A tụgharịa a nwụrụ ma nweta uru 5; Player B na-apụta a na-anwụ ma na-akawanye uru 5 nakwa; ọkpụkpọ A na-apụta ịnwụ ọzọ ma nweta uru 4 ugbu a; ọkpụkpọ B na-apụta nwụọ ma nweta uru 6; Player B ga-abụ onye mbụ ga-eji ụkpụrụ nke dice 4 na 6 kpoo (ụkpụrụ nke ọkpụkpụ ikpeazụ nke ndị egwuregwu A na B na-egwuri egwu).
Na-akpụ akpụ akụkụ 🧩
Mgbe ọkwa nke ịkọwapụta onye malitere egwuregwu backgammon, onye ọkpụkpọ ọ bụla, n'aka nke ya, ga-emerịrị tụgharịa 2 dais ma mee ka iberibe gị dị ka ụkpụrụ data si dị.
Ọ bụla ọkpụkpọ mgbe niile megharia iberibe ahu n'otu uzo, otu klọọkụ na nke ọzọ na-echegharị.
Ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ ugbu a enweghị ike ịme ezigbo ihe na ụkpụrụ ndị enwetara na dice, nke ikpeazụ ga-agafe oge.
Thelọ nke otu mpempe akwụkwọ enweghị ike ịbụ nke nwere 2 ma ọ bụ karịa ibe ya. Ọ bụrụ na ụlọ a lekwasịrị anya nwere naanị 1 na-emegide ibe ya, a na-ejide ya, hapụ bọọdụ wee gaa na "mmanya".
Mgbe onye ọkpụkpọ nwere otu ma ọ bụ karịa weghaara iberibe, ọ nwere ike ịme mgbapụta, ya bụ, na - ebugharị nke na - ewepu iberibe gị jidere na mmanya ahụ ma debe ya n'ime ụlọ, na - erubere iwu mgbe niile na ụlọ ezubere iche enweghị ike ịnwe ihe karịrị 1 mmegide.
Ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ tụgharịa otu ụkpụrụ ahụ na dice 2 ya, ọ nwere ikike ịme 4 na ụkpụrụ lido kama ịmegharị 2 na-emebu.
Wepụ iberibe mbadamba
Onye ọkpụkpọ nwere ike ịmalite wepu iberibe ya na bọọdụ Backgammon mgbe ha niile nọ na obere quadrant (nke a na-akpọkwa akụkụ dị n'ime). Iji wepu otu, onye ọkpụkpọ ahụ ga-atụgharị ego ya na ọnụ ọgụgụ nke akụkụ anọ fọdụrụ na daị. Ọ bụrụ n’inweta uru dị elu karịa nke ịchọrọ maka iberibe kachasị dịpụrụ adịpụ, ị kwesịrị iwepu mpempe ndị ahụ. Ihe Nlereanya: Ọ bụrụ na iberibe furthest chọrọ a 4 ga-ewepụ na player na-ewe a 6, o nwere ike wepu ihe ọ bụla nke ndị a iberibe mbadamba.
Onye mmeri nke egwuregwu ahụ bụ onye ọkpụkpọ na-ewepu mpekere ya niile na bọọdụ n'ihu onye iro ahụ.
Ndụmọdụ maka ịkpọ Backgammon🤓
Zere ịhapụ naanị otu iberibe n'ụlọ
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhapụ otu iberibe naanị gị, gbalịa ịhapụ ya ka ọ dị anya site na mpempe akwụkwọ ahụ
Mee ka ụlọ ikpeazụ nke onye iro gị mechie
Nweta ọtụtụ ụlọ dị ka o kwere mee